Idizayini noMhlangano - iMestech Industrial Limited
Idizayini yomkhiqizo nomhlangano kwakha umjikelezo ophelele wokukhiqiza womkhiqizo.
IMestech ineqembu elinolwazi futhi nelinolwazi loonjiniyela, abangakunika ukwakheka kwezingxenye zepulasitiki nezensimbi zabathengi, izinto zikagesi, amadivayisi wezokwelapha neminye imikhiqizo ngokuya ngezidingo zakho, kanye nokwenza imodeli, ukuqinisekiswa nokwenza ngcono ukuklama.
Sinikeza ukwakhiwa komkhiqizo kulezi zinto ezilandelayo:
1. Idizayini yezimboni yomkhiqizo omusha.
2. Ukuklanywa okuphelele kanye nokuhlaziywa kokungenzeka kwemikhiqizo kagesi nezinto zikagesi ezincane zasendlini.
3. Imininingwane yedizayini yezingxenye zepulasitiki nezingxenye zehadiwe.
4. Ikhasimende lizohlinzeka ngemininingwane yangempela nezidingo ezithile zokubukeka nosayizi wedizayini, futhi linikeze nemidwebo ye-3D noma ye-2D yezingxenye ze-PCBA, amalunga nezinye izingxenye ezihlobene nokubukeka komkhiqizo nosayizi.
5. Yenza ama-prototypes abhekise kwimidwebo yomklamo, futhi uqinisekise ukwakheka futhi uphelelise umklamo. Futhi ikhombise ikhasimende ukuze liqinisekiswe.
Abasebenzi bahlanganisa imikhiqizo
Idizayini yomkhiqizo we-elekthronikhi
Idizayini yomkhiqizo weSilicone
Idizayini ye-die cast
IMestech isungule uhlelo lokukhiqiza oluphelele nokuthengiswa kwempahla. Ngaphandle komklamo omusha womkhiqizo, singanikeza amakhasimende ngezinsiza zokuma okukodwa kufaka phakathi ukukhiqizwa kwesikhunta, ukukhiqizwa kwezingxenye nokuthengwa kwempahla, ukuhlangana komkhiqizo, ukuhlolwa, ukupakisha kanye nokuthuthwa kwempahla
1. Ukwenziwa kwesikhunta seplastiki nezingxenye zokujova ngomjovo, ukuphrinta kwesilika kwesikrini, i-electroplating
2. Metal izingxenye processing
3. Ukuthengwa kwezinto zokupakisha nezinye izinto ezengeziwe
4. Ukuhlangana komkhiqizo nokuhlolwa.
5. Ukupakisha umkhiqizo nokuthumela.
Uma unomqondo omuhle womkhiqizo neqembu lamakhasimende, siyajabula ukukunikeza uchungechunge lwezinsizakalo kusuka ekwakhiweni komkhiqizo kuye ekukhiqizeni umkhiqizo oqediwe.